Puntland oo sheegtay inay bur-burisay saldhigyo ay lahaayeen Al-shabaab (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Puntland oo sheegtay inay bur-burisay saldhigyo ay lahaayeen Al-shabaab (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Calmadow ee gobolka Bari ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeysay ay halkaasi ka dhaceen weerar ay ciidanka maamulka Puntland ku qaadeen fariisimo ay dagaalyahanadda Al-shabaab ku leeyihiin deegaankaas.
Sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay inay ku guuleysteen inay gebi ahaan bur-buriyaan saldhigyo waaweyn oo ay dagaalyahanadda Al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Calmadow.
“Weerarka ay ciidamadeena ka fulliyeen deegaanka Calmadow, waxaa qasaare baahsan loogu geystay Al-shabaab, sidoo kale waxaa weerarkaasi lagu burburiyey saldhigyo ay inta badan ku dhuumaleystaan cadowga Al-shabaab, halkaas oo ay dagaalada kasoo qaadi jireen” Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah saraakiisha maamulka Puntland.
Dhinaca kale, ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha Al-shabaab, kaas oo ay kaga hadlayaan fariismaha la sheegay inay ku sugnaayeen ciidankooda oo la burburiyay.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan ayaa kusoo beegmayaa xilli 8-da bishaan June ay dagaalyahanadda Al-shabaab weerar culus ku qaadeen saldhigga ay ciidamada daraawiishta Puntland ku leeyihiin deegaanka Af-urur ee gobolka Bari, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 50 askari oo ciidankaasi ka tirsanaa.